बिवाह भएकै दिन यी युवतीले सं सा र छा,,डि न् ? द लि त केटी भनेर केटाको परिवारले बिवाह गर्दिन मानेका थि,,एनन् - Filmy News Portal Of Nepal
मानिसको जीवनको के भर छर ? वेहुली बनेर जीवनका आगामी दिनको कल्पना सजाउँदै गएकी एक युवतीको त्यसै दिन आफ्नो जीवन स मा प्त गरेकी छन् । जातिय वि भे दका कारण एक किशोरीले अनाहकमा आफ्नो जीवन त्या ग गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन । कथित उपल्लो जातसंग विवाह गरेकी एक किशोरीले चरम जातीय वि भेदको ज्या दती खे प्दै अ का लमा ज्या न गु,,माउनु परेको हो ।
प्रदेश ५ को रुपन्देहीमा भएको यो घ टनाले अहिले मुलुकभर चर्चा छ । जातिय वि भेदको यो चरम नमुनाले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ । दुई दिनकै फरकमा नेपालमा जातिय वि भेदका कारण ४ जनाले ज्या न गुमाएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिममा पनि जातिय वि भेदका कारण वेहुला सहित ३ किशोरको ज्या न गएको छ । वेहुली लिन भन्दै १९ जना साथी लिएर जाजरकोट गएका उनीहरुको ज्या न गएको हो ।
यसैगरी केहीदिन अघि जाजरकोटमा पनि यस्तै घटना घटेको थियो । रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा ११ बड्की गुम्बाकी १५ वर्षीया दलित समुदायकी किशोरीले पारिवारिक उ त्पिडन सहन नसकेर ज्या न गुमाएकी छन् । उनी विवाह गरेर पतिको घर गएकी दिन झु..ण्डिएको अवस्थामा मृ,,,त फेला परेकी थिएन् ।
देवदहकी अङ्घिरा पासीले स्थानीय २२ वर्षीय वीरेन्द्र भरसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । गत जेठ ९ गते गाउँमा भएको भेला र छलफल पछि वडाका वडाध्यक्ष अमरबहादुर चौधरी लगायतका समाजसेवीले उनीहरुलाई विवाहको अनुमति दिएका थिए । जनप्रतिनिधिले नै किशोरको जिम्मा लगाएर घर पठाइएकी किशोरी मृ त फेला परेकी हुन् ।
घर गएपछि किशोरको आमाले जातिय वि भे द गर्दै ला च्छ ना लगाएपछि उनले यस्तो निर्णय लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानवाट देखिएको छ । आमा भौतिक आ क्र म णमै उत्रिएपछि उनी शनिवार घर नजिकैको एउटा रुखमा झु ण्डि एको अवस्थामा मृ त फेला परेकी थिइन् । किशोरीका माइती पक्षले आफ्नो छोरीले आफै यस्तो गरेको नभई उनको ह,,त्या गरेर रुखमा झु ण्ड्याएको आ रो प लगाएका छन् ।